सबै विद्यार्थी सरकारी स्कुल जान थाले पछि नेपाल का एक हजार निजी स्कुल बन्द हुँदै ! – Sandesh Press
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण बन्द रहेको शैक्षिक क्षेत्र र यसमा आश्रित जनशक्ति आर्थिक सङ्कटमा परेका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले विद्यालयहरूको आर्थिक सङ्कट टार्न अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।
शिक्षकहरूले भने तलब नपाउँदा झन्डै दुई लाख परिवार दैनिक खर्च टार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै मध्यस्थता गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालयहरूले अभिभावकसँग शुल्क मागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्नो निर्देशन विपरीत कार्य नगर्न भनेको छ।
भर्खरै बल्ल आयो कन्चनकी प्रेमिका अनिशाले खुलाइन् सोच्नै नसक्ने यस्तो छ वास्तविकता-
Prev१२ दिनपछि आमासंग बोले कन्चन, फेरी भेन्टीलेटरमा किन लगियो?
टिकटकबाट एकाएक भाइरल बनेकी बेहुलीकाे बास्तविकता यस्ताे | यसरी भइन् भाइरल
बसको ठ’क्करबाट दुधे बालकसहित श्रीमान्, श्रीमतिको मृ’त्यु